အစိုးရက လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများကို ပစ်မှတ်ထား ချုပ်ချယ်ဖမ်းဆီး အရေးယူနေမှုများကို အမြန်ဆုံး ရပ်တန့်ပေးရန် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားသူများက တောင်းဆိုလိုက်သည် […]
August 28, 2015 • Read more ➤
လူ့အခွင့်အရေးသမားတွေ ထောင်ချခံနေရတာကို ရပ်တန့်ပေးပါ
လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ ဆိုတဲ့ အစီရင်ခံစာကို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အသင်း (AAPP) နဲ့ မြန်မာ့ အရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သူ တွေက သြဂုတ်လ (၂၇)ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ မူရင်းသတင်းကို ဤနေရာတွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
The Burma Partnership (BP) and the Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) launchedareport Thursday focused on the situation of human rights defenders in Myanmar and appropriate protection mechanisms […]
August 27, 2015 • Read more ➤
လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေသူတွေ ဖမ်းဆီးခံနေရတာတွေ အဆုံးသတ်ရေး ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကို ရန်ကုန် ဗဟန်းမြို့နယ်က တော်ဝင်နှင်းဆီခန်းမမှာ သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်၊ ဒီကနေ့ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ကိုသီဟထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။ မူရင်းသတင်းကို ဤနေရာတွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
This 8-8-88 anniversary isareminder that it has been more than four years since Burma undertook economic and political reforms when President Thein Sein came into power […]
August 8, 2015 • Read more ➤
Min Min* has been actively promoting land rights issues for over two decades. In the late 1990s she was arrested and imprisoned for her political activities, and during her detention she was subjected to torture and severe abuse at the hands of authorities. After languishing in prison for years, she was finally released. Undeterred by her experience, she continued to pursue her rights activism […]
August 1, 2015 • Read more ➤
Followingastudent demonstration in 1998, Khin Cho Myint was arrested after being given up by one of her colleagues. She was interrogated, sitting onastool, in Insein prison for 48 hours before being sent to solitary confinement for one week […]
July 5, 2015 • Read more ➤
Just five years ago, Myanmar was isolated from the rest of the world. Consideredapariah state, the Southeast Asian nation was ruled with an iron fist byamilitary junta with no regard for human rights […]
June 30, 2015 • Read more ➤
June 20, 2015 • Read more ➤
Four years ago,aclash between government soldiers and rebels from the Kachin Independence Army in northern Myanmar renewed civil war in Kachin State […]
June 11, 2015 • Read more ➤